रत्ननगर महोत्सव कृषिसगैपर्यटन र वैकल्पीकऊर्जा मुख्य आर्कषण : संयोजक विसुराल (अन्र्तवार्ता) – Saurahaonline.com
रत्ननगर महोत्सव कृषिसगैपर्यटन र वैकल्पीकऊर्जा मुख्य आर्कषण : संयोजक विसुराल (अन्र्तवार्ता)
चितवन यतिवेला महोत्सवमय बनिरेहको छ । जिल्लामा एकपछि अर्को महोत्सवको भईरहेका छन् । जिल्ला शैक्षिक मेला, चितवन हात्ती महोत्सव सकिएसगै यति वेला औद्योगिक प्रर्दशनी र सौराहा फुड फेष्टिवलको तयारी भईरहेको छ । भने रत्ननगर महोत्सव आज देखि सुरु हुदैछ । चितवनको गौरव लर गरिमामय प्रस्तुतीका रुपमा रत्ननगर महोत्सव २०७२ यहि गते सम्माननिय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट उद्धघाटन गरिदैछ ।
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ र रत्ननगर नगरपालिकाको आयोजनामा यही माघ १४ देखि २४ गतेसम्म टिकौली चौरको प्रदर्शनी मैदानमा हुन लागेको रत्ननगर महोत्सव २०७२ हुदैछ । यो पटक कृषि र पर्यटनसगै वैकल्पिक उर्जालाई विशेष प्रस्तुतीका रुपमा लिदै पहिलो पटक महोत्सव अन्र्तगत नै टाडी बजारमा चिकेन एण्ड एग फेष्टिवल पनि गरिने आयोजकले जनाएको छ । आठौ संस्करणको महोत्सव रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर विसुरालको संयोजकत्वमा हुदैछ । विभिन्न व्यवसायिक तथा सामाजिक संघसंस्थासँग आवद्ध अध्यक्ष विसुराल शिखर पोल्ट्री ब्रिडिङ प्रा.लि. तथा शिखर ह्याचरी प्रा.लि. का अध्यक्ष, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ चितवनका उपाध्यक्ष, पूर्वी चितवन पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्षका रुपमा समेत कार्यभार समालेका छन् । यसै सन्र्दभमा सौराहा अनलाईनको जम्काभेटमा उनीसगं प्रधानसम्पादक राजेन्द्र आचार्य र सम्पादक आन्नद पोख्रेरलले गरेको कुराकानी :
प्रश्न : आठौ संस्करणको रत्ननगर महोत्सवको तयारी कस्तो छ ?
उत्तर : एउटा मेलाको रुपमा सुरु भएको कार्यक्रमलाई आज मुलुककै नमुना महोत्सव बनाउदै आठौ संस्करणको महोत्सव गर्न पाउदा हामी निकै हर्षित छौ । हाम्रो सबै तयारी पुरा भई आज भईसकेको छ । किनकी स्टल निर्माण नगर सजावट देखि थप भएको स्टल समेत निर्माण भईसकेको छ । अब हामी उद्धघाटन कसरी भव्य र सभ्य बनाउने भन्ने तयारीमा छौ । सबै स्टेरिङ्ग कमिटी देखि उपसमितिहरु त्यारी अवस्थामा छन् । सुरक्षा प्रबन्ध देखि सबै तयारी अवस्थामा छ । उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले दिउसो १२ वजे उद्धघाटन गर्दै हुनुुहुन्छ ।
प्रश्न : यो पटकको महोत्सवको अर्कषणहरु के–के छन् त ?
उत्तर : मुलत हामीसगै स्थानिय आत्मनिर्भर बन्ने व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गदै आएका छौ । हामीले पोल्ट्री, माछा, मह र केरा व्यवसायको बजारीकरण गर्न प्रवर्जद्धन यस अघिका महोत्सवमा गरिसकेका छन् । यो पटक पनि कृषि र पर्यटनको उर्वर भूमि रहेको रत्ननगरसगै समग्र जिल्लामा कृषिमा आधुनिकरणका लागि थोपा सिचाई पद्धती बारे डेमो प्रर्दशनी गरि कृषकहरुलाई जानकारी गराउने र रत्ननगर क्षेत्रमा पर्ने सौराहालाई र्आिर्थक क्षेत्र घोषण गर्ने तयारी र ओझmेमा परेको पर्यटकीय स्थलहरु टिकौली, चेपाङ्ग ताल, जौविक विविधता सूचना केन्द्र, लगायतका ठाउहरुलाई उजागर गर्दैछौ । यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिनको प्रदर्शनी, करोडौँ वर्षअघि उत्पत्ति भएको डाइनोसको प्रदर्शनी, ‘च्याउ एक परिकार अनेक’ भन्ने उद्घोषका साथ विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउने, बालउद्यान, विेशष माछा परिसर, स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति, झाँकी सहितको शोभायात्रा पनि यहांको मुख्य आकर्षण हो । भने वैकल्पिक उर्जा अन्र्तगत अब कसरी उर्जा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिदैछौ । वंगलादेशसहिको अन्र्तराष्टिय स्टल पनि छन् ।
प्रश्न : १९ दिपछि मिति सारेर महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, अझै नाकावन्दी खुल्न सकेको छैन्, फेरि असर पर्ने अवस्था छ की छैन् ।
उत्तर : हो देश अहिले जटिल मोडमा छ । मुलुकमा हुने धेरै महोत्सव मध्ये केपिह मात्रै महोत्सवरु भईरहेका छन् । जसमध्ये मुलुककै प्रमुख मध्येमा पर्ने रत्ननगर महोत्सव पनि हामीले आयोजन गर्ने सबै तयारीका साथ उद्धघाटन गर्न हामी तप्तर छौ । यसकारण असर परेको छैन्, भन्दा हुन्छ भने फेरि हामी ४ सय २५ स्टल बुकिङ्ग भईसकेको अरु थप गर्न बाध्य भई स्टल थप पनि गरिसको छौ ।
प्रश्न : महोत्सवमा आउने दर्शकहरुले कस्ता–कस्ता स्टलहरु देख्न पाउछन् ।
उत्तर : महोत्सव यो पटक हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा पाईने सबै कषि जन्य वस्तुहरुको स्टसगै विभिन्न उद्योग, व्यवसायहरुको स्टल रहनेछ । भने स्वदेशी उत्पादन भएका वस्तुरुको स्टल वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धीका स्टलहरु रहेका छन् । यस्तै पोल्ट्री, माछा, हस्तकला, बैंक, सरकारी कार्यालय, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, चिया, डेरी, अटो, सूचना प्रविधि, बालउद्यान सगै भारत, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तानबाट कपडाका स्टलहरु पनि राखिएको छ । सस्तो मुल्यमा ति सामानहरु किन्न पाउने व्यवस्था पनि छ । यस्तै महोत्सवमा उठ, अस्ट्रिज र याक देखि हिमाल देखि तराई सम्मका विभिन्न उत्पादनहरु ४ सय २५ बाट बढाएर ४ सय ५० वटा स्टल राखिएको छ
प्रश्न : रत्ननगर महोत्सवमा नै आम र्दशकहरु किन आउने त?
उत्तर : समग्र चितवनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा टेवा पु¥याउने, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेसगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउने आम र्दशकहरु म्होत्सवमा आउनुपर्छ भने यहां राखिएका प्रर्दशनीबाट नयां कुराहरु सिकेर र्आिर्थक क्रान्ति तर्फ उन्मुख हुनका लागि महोत्सवमा र्दशकहरु ऋाउन पर्दछ ।
प्रश्न : महोत्सवबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ त ?
उत्तर : अपेक्षाको नै कुरा गर्ने हो भने यो पटकको महोत्सव भव्य र सम्य हुनेछ अपेक्षा छ । भने ४ लाख ५० हजार दर्शकले मेला अवलोकन गर्ने अनुमान गरेका छौँ । करिब २० करोडको आर्थिक कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । वर्तमान विद्यमान विशेष असहज परिस्थितिमा पनि महोत्सव आयोजना गर्नु फरक कुरा हो । खाना पकाउने ग्यासको अभावमा वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा र वायोग्यासको प्रवद्र्धन गर्न लागेका छौँ । पहिलो पटक डायनोसर प्रदर्शनी गर्दैछौँ । जसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि थप आयाम थप्ने प्रयास गरेका छौँ । र महोत्सव सफल बनाउन सबैलाई यो पत्रिका मार्फत अनुरोध गर्दछु ।
न्यूयोर्क ! गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाको उपाध्यक्ष पदमा अम्मर.....